Gufgaf|Online छक्का पञ्जा ३ रिलिजको संघारमा, बाहिरियो दिपक जितु र केदार बिच भएको झगडाको भिडियो
छक्का पञ्जा ३ रिलिजको संघारमा, बाहिरियो दिपक जितु र केदार बिच भएको झगडाको भिडियो
गफगाफ - चलचित्र छक्का पञ्जा तिन रिलिज डेट नजिकिदै गर्दा चलचित्र निर्माण टिम विच भएको झगडाको भिडियो बाइरिएको छ । भिडियोमा चलचित्रका मुख्य ३ कलाकार दिपक राज गीरी, जितु नेपाल र केदार घिमिरे एक अर्का सग असन्तुष्ट देखिएका छन् । चलचि छक्का पञ्जा ३ को जिम्मेवारीका विषयमा एक अर्कामा दोसारोपण गरिरहेको भिडियोमा प्रष्ट देखिएको छ । जितु र केदारले अफुहरुलाई व्यवास्ता गरेर जे काम गर्दा नि एकलौटि व्यवहार गरेको आरोप दिपक राज गीरीलाई लगाएका छन् ।
यता दिपकले भने भन्नै पर्ने कुरा भनेको तर सबै कुरा भन्न आवस्यक नरहेको बताएका छन् । चलचित्र रिलिजको अन्तिम समयमा आएर यस्तो भिडियो बाहिरिदा सबै चकित भएका छन् । तर भिडियोको यथार्थ कुरा बुझ्नको निम्ति भने भिडियो अन्तिम सम्म हेर्नु पर्ने हुन्छ । चलचित्रलाई फरक शैलीले प्रचार गर्नका निम्ति दिपक दिपा जितु र केदारले उक्त प्रेंक भिडियोको निर्माण गरेका हुन् ।
सर के लिनुहुन्छ...???
मुन्द्रे र उस्को बुबा एउटा होटलमा गएछन्
वेटरःसर के लिनुहुन्छ...???